कसरी काम गर्ने सिडिया अनुप्रयोगहरू पाउने आईफोन समाचार
जेलब्रेक शुरू भएदेखि, तपाईं धेरैले यो गुनासो गर्नुभयो हामीले प्रकाशित गर्ने सिडिया अनुप्रयोगहरू हाल आईफोनले काम गर्दैन। स्पष्ट रूपमा हामी केहि आविष्कार गर्दैनौं, न त हामीसंग कुनै रहस्य छ जुन हामी उनीहरूलाई साझा गर्न सक्दैनौं तिनीहरूलाई कामका लागि। समस्या, जैसा कि हामीले पहिले नै धेरै पटक संकेत गरिसक्यौं, त्यो मोबाइल सबस्ट्रेट अझै उपयुक्त छैन, तर हो त्यहाँ एक सानो "ट्रिक" छ जुन मेरो लागि पूर्ण रूपमा काम गर्दछ जब अनुप्रयोगहरू मेरो लागि काम गर्न रोक्दछन्, र मँ यो के हो भन्दै छु।
निश्चय यो तपाईलाई भएको छ कि तपाईले एउटा सिडिया अनुप्रयोग स्थापना गर्नु भएको छ, जसले राम्रोसँग काम गरेको छ, र त्यसको लगत्तै, यसले काम गर्न रोकेको छ, यो अब सेटिंग्समा देखा पर्दैन। कारण यो छ कि तपाईंले उपकरणलाई पुनःबुट गर्नु भएको छ (वा कहिलेकाँही जब यो शृंखला गर्दा हुन्छ) र मोबाइल सब्स्ट्रेट र प्राथमिकता लोडरले काम गर्न छाडेको छ। अनुप्रयोग फेरि स्थापना गर्दा केहि समाधान हुँदैन, र तपाईंले स्थापना गर्नुभएको कुनै पनि अन्य अनुप्रयोगले काम गर्दैन। तिमी के गर्न सक्छाै? ती दुई विस्तारहरूलाई एकै चोटि पुन: स्थापना गर्नुहोस्। मँ भन्छु कि यो कसरी सजिलो गर्ने।
Cydia खोल्नुहोस्, सबै प्याकेजहरू अद्यावधिक गर्न समाप्त हुनका लागि यसको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस्, र "खोजी" क्लिक गर्नुहोस्। मोबाइल सब्सट्रेट खोज्नुहोस्, र यसमा क्लिक गर्नुहोस्। शब्द "परिमार्जन" माथिको दायाँ कुनामा देखा पर्ने छ (किनकि तपाइँले यो स्थापना गर्नुभएको छ), यसमा क्लिक गर्नुहोस् र "पुनर्स्थापना" विकल्प छनौट गर्नुहोस्।
तर अझै «कन्फर्म» मा क्लिक नगर्नुहोस्, तर केवल तल, मा «कतारमा जारी राख्नुहोस् in। अब फेरि "खोजी" सेक्सनमा जानुहोस् र प्राथमिकता लोडरको खोजी गर्नुहोस्, प्याकेज चयन गर्नुहोस्। माथिको दायाँ कुनामा "परिमार्जन" मा क्लिक गर्नुहोस् र "पुनर्स्थापना" विकल्प चयन गर्नुहोस्।
ध्यान दिनुहोस् कि अब "संशोधन" भाग मा दुई अनुप्रयोगहरू देखा पर्दछ, मोबाइल सब्सट्रेट र प्राथमिकता लोडर। अब तपाइँ "कन्फर्म" चयन गर्न सक्नुहुन्छ। जब प्रक्रिया समाप्त हुन्छ, "रिस्टार्ट स्प्रिंगबोर्ड" बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। जब लक स्क्रिन देखा पर्दछ, तपाइँको समर्थित Cydia अनुप्रयोगहरू पूर्ण रूपमा काम गर्नुपर्दछ। तपाईंले यो कार्य प्रत्येक पल्ट दोहोर्याउनु पर्छ जब तिनीहरूले काम गर्न रोक्छन्। भाग्यवस, यो तब हुन्छ जब तपाईं आफ्नो उपकरणलाई पुन: शुरू गर्नुहुन्छ (यो मलाई एक शवासनको साथ भएको छ तर यो प्रायः यस्तो हुँदैन)। यो कम से कम आंशिक समाधान हुन्छ मोबाइल सब्स्ट्रेट अद्यावधिक नभएसम्म।
थप जानकारी - कसरी एक Cydia आइकन परिवर्तन गर्न को लागी एक आईओएस7लुक
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » जेल » Cydia » कसरी काम गर्ने सिडिया अनुप्रयोगहरू पाउने
जोर्डी कास्टेल्स कासानोवास भन्यो
उत्तम ... वास्तवमा समय मा केहि tweats काम रोकेको थियो। योगदानको लागि धन्यवाद, अब सबै चीजहरू सही तरीकाले काम गर्दछन्
जोर्डी कास्टेल्स कासानोवासलाई जवाफ दिनुहोस्
प्राथमिकता लोडर जहाँबाट म यसलाई डाउनलोड गर्छु
जोआक्विनजेभियरलाई जवाफ दिनुहोस्
यो पूर्व स्थापित रिपोमा छ।
उत्तम। अब यो काम गर्दछ।
शुभ प्रभात मलाई न त प्राथमिकता लोडर कुन रेपोमा मैले फेला पार्न सक्छु?
Nnakanoo लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले रेपोमा रहेको पाएको छु http://cydia.myrepospace.com/TeamiPhoneXtreme/ र चाल सही तरिकाले काम गर्दछ !!! धेरै धन्यवाद!
त्यहाँ संस्करण आउँछ जुन पुरानो हो ...।
नमस्कार, तपाईं कस्तो हुनुहुन्छ?, मेरो ट्याम्पोको प्रेफरन्सेसन लोडर देखा पर्दा, यी २ विकल्पहरू देखा पर्दछ, मोडमीबाट वेपरप्रेसनलोडर र बिगबॉसबाट रेस्रिडलोडर, तिनीहरूमध्ये कुनै पनि पूर्व स्थापित छैन।
Klaret लाई जवाफ दिनुहोस्
अमी प्राथमिकता लोडर देखा पर्दैन र मैले बिगबास रेपो खोजेको छु…।
ठिक छ, मलाई थाहा छैन के तपाईंलाई भन्नु छ, यो त्यहाँ हुनु पर्छ।
तपाईंले Cydia मा सेटिंग्स प्रयोगकर्ताबाट ह्याकर वा विकासकर्तामा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि यो देखा पर्दछ।
Elsl लाई जवाफ दिनुहोस्
प्याकेजहरूमा खोजी गर्नुहोस्! Precereceloader मात्र प्याकेजहरु मा बाहिर आउँछ !! र यसले काम गर्दछ त्यहाँ वर्णन गरिएको छ, मैले मात्र प्रयास गरे
Pací लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले तपाईको भनेको कुरा पूरा गरें, साथै स्वाइपसेलेक्सन पनि स्थापना गरें, उपकरण पुनःस्टार्ट गर्दा मैले एउटा सानो चिन्ह पाएँ जसले आइकनहरूको बारेमा केहि भने। त्यो क्षणमा सबै आईकनहरू छरिएका छन्, र साइडिया अदृश्य छ, मैले यसलाई बन्द गरेको छु र खुला गरेको छु र सबै चीज समान छ।
मेरी आमा कति नौली कुमारी
तिनीहरूले मलाई त्रुटि दिन्छन्, यसले मोबाइलसबस्ट्रेट प्याकेजको लागि फाइल पत्ता लगाउन सक्षम भएन भनि भन्छ ...।
evasi0n .7.0.2.०.२ मा अद्यावधिक गर्नाले मलाई दुबै प्याकेजहरू पुनर्स्थापित गरिसकेको छ
सौरिकले मोबाइल सब्स्ट्रेट स्थापना नगर्ने भन्छन, जुन उहाँसँग तल नपुगेसम्म सुरक्षित हुँदैन। त्यसैले अब प्रतीक्षा गर्न को लागी!
एडुआर्डो जिमेनेज भन्यो
तपाई शिक्षक शिक्षक हुनुहुन्छ उनीहरूले सबैलाई थोरै धन्यवाद फेरि खिचे
एडुर्डो जिमेनेजलाई जवाफ दिनुहोस्
मैले मोबाइल सब्सट्रेट र प्रेफरन्सेसन लोडरलाई पुन: स्थापना नगर्न एक समाधान पायो हरेक समय जब म आईफोन रिबुट गर्दछु वा रेफरिring गर्दै छु, मोबाइल सब्सट्रेट फिक्स स्थापना गर्नुहोस् रेपोबाट http://repo.biteyourapple.net/ र भोईला, जेप्पेलिन, पुशमोड र एक्टिभेटर स्थापना गर्नुहोस् र यो "सेटिंग्स" मेनूबाट हटाइएको छैन, आईफोन on मा परीक्षण गरीएको छ, म अन्य ट्वीक्स, बधाई परीक्षण गर्दैछु।
न त यो जस्तो कार्य गर्दछ, यदि केहि स्थापना भएको छैन, केहि देखा पर्दैन ... आईप्याड एयर
पढ्दा तपाईले अधिक ध्यान दिनु पर्छ। A7 का साथ उपकरणहरूले ट्वीकहरू 64 5-बिट संरचनामा अनुकूलित हुनको लागि कुर्नु पर्नेछ। मसँग आईफोन s एस र आईप्याड एयर छ र त्यो प्रतिक्षामा मैले आफूलाई भेट्टाएको छु ... तपाईं पहिलो पढ्न रोकिनु बिना आलोचना गर्न सक्नुहुन्न ...
तेजुवानलाई जवाफ दिनुहोस्
रोबर्ट जिमेनेज भन्यो
आईफोन,, पहिलो पटक सबै खाली थियो, कुनै प्याकेज - रिस्टोर र दोस्रो छैन ... केही छैन - मसँग आभूषण प्रतिमा मात्र छ, खुला साइडिया, सामान्य लोड केहि पनि म खोल्दिन, खाली सबै खाली छ।
रोबर्ट जिमेनेजलाई जवाफ दिनुहोस्